LUUQADII Fleet Air Berlin FSX & P3D - Rikoooo
downloads 35 998
liiska oo dhamaystiran qorayaasha iyo qoraallada galay baakada
Halkan waxaa ku qoran mid ka mid ah maraakiibta ugu fiican soo bixi on Rikoooo, diyaaradaha Baro of Air Berlin, duuli toddoba daydo in ay kor u raxan ah in 2016. Si ay kuu siiyaan waayo-aragnimo ah oo xaqiiqo waxaan ku soo wada ururiyey in hal pack a freeware ugu fiican ee la joogo. Waxaan sidoo kale ka mid ahaa FMC ah, aaladaha cusub, GPWS, xawaaraha V, dhawaaqyada engine, kaabidda iyo hagaajinta xad-dhaaf ah, eeg auto-dalka, HUD, curiyay guddi 2D, repaints badan Air Berlin. A u abuuray kala duwan ee freeware mahad weyn, liiska dheer waa in baakada.
awoodaan in ay duuliyaha Airbus A319-112, A320-214 iyo Sharklets A321-211 aan VC iyo Ku-A330 200 Waxaad noqon doontaa. Sidoo kale Boeing B737-700 iyo B737-800 iyo ugu dambeyntii Dash Bombardier 8 Q400 ah (No VC).
Qoraa: Liiska buuxa ee qorayaasha iyo dokumentiyada xirmada